दुःख’द खबर ओ’च्छ्यानमा राखिएको मोबाइल प’ड्कियो, १४ वर्षीया किशोरीको मृ’त्यु !! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियदुःख’द खबर ओ’च्छ्यानमा राखिएको मोबाइल प’ड्कियो, १४ वर्षीया किशोरीको मृ’त्यु !!
काठमाण्डौ । मोबाइल फोनमा वि’स्फोट हुँदा एक १४ वर्षीया किशोरीको मृ’त्यु भएको छ । मृ’तक युवतीले आफ्नो फोन चा’र्जमा राखेर सि’रानीमा राखेकी थिइन् । उनी सु’तिरहेको अवस्थामा फोन अचानक वि’स्फोट भएको हो । यो घ’टना का’जकिस्तानको बा’स्तोबको हो । डेली मेलको रिपोर्टअनुसार १४ वर्षीया अलुआ ए’सेटकिजी गीत सुन्दै सु’तेकी उनको श’व भोलिपल्ट ओ’च्छ्यानमा थियो ।वि’स्फोट भएको फोनले उनको टाउकोमा चो’ट लागेको उनको मृ’त्यु भएको हुनसक्छ ।
स्थानीय मिडियाका किशोरीको फोन बढी ता’तेकोले वि’स्फोट भएको हो । अहिलेसम्म वि’स्फोट भएको स्मा’र्टफोनको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।त्यस्तै भारतको आ’न्ध्रप्रदेशमा मोबाइल फोनमा कुरा गरिरहेको समयमा मोबाइल वि’स्फोट हुँदा एक युवकको मृ’त्यु भएको छ । चां’गु म’स्तान रे’ड्डी नाम गरेका ३१ वर्षीय व्यक्तिले मोबाइल चा’र्ज गरिरहेकै समयमा फोनमा कुरा गरिरहेका थिए । अ’चानक ‘हाइ भो’ल्टेज’ का कारण मोबाइल वि’स्फोट हुँदा उनी ग’म्भिर घा’इते भएका थिए ।
दु’र्घटना हुँदा रे’ड्डी आफ्नो घरमा एक्लै भएको प्रहरीले जनाएको छ । छिमेकीले तार ज’लेको ग’न्ध पाएपछि उनको कोठामा पुग्दा रे’ड्डी अ’चेत अवस्थामा ढ’लेका थिए ।उनलाई छिमेकीले नै अस्पताल लगेका थिए । तर अस्पताल प्र्’याउँदा उनीको मृ’त्यु भ’इसकेको चि’कित्सकले बताएका थिए । मोबाइल फोन पू’र्ण रुपमा ज’लेका कारण कुन कम्पनीको मोबाइल हो भन्नेसमेत प्रष्ट हुन न’सकेको प्रहरीले जनाएको छ ।